चर्चित व्यक्ति जसलाई २०७५ मा देशले गुमायो
काठमाडौं – विक्रम संवत्को पात्रो फेरिइसकेकाे छ । अर्थात आइतवारबाट विक्रम संवत् २०७६ शुरू भइसकेकाे छ ।
हामीले २०७५ सालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक घटनाक्रमको समीक्षा गरेका छाैं ।
वर्ष २०७५ मा हामीले केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई गुमायौं ।
बहालवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारी
गएको फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा बहालवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित ७ जनाको ज्यान गयो । तेह्रथुमको आठराईमा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री अधिकारी सवार हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्‍यो । उक्त दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारी सहित देशका प्रतिष्ठित व्यापारी आङछिरिङ शेर्पाको पनि निधन भयो ।
वृद्धभत्ताका सूत्राधार भरतमोहन अधिकारी
नेकपा नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको फागुन १८ गते शनिवार निधन भयो । फोक्सो र मुटुसम्बन्धी समस्याबाट पीडित अधिकारीको धुम्बाराहीस्थित हेम्स अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो । २०५१ सालको कम्युनिष्ट सरकारका अर्थमन्त्री रहेका अधिकारी आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ लगायत लोकप्रिय कार्यक्रमका योजनाकार थिए ।
पञ्चायतका डिजाइनर तुलसी गिरी
पुस ३ गते पूर्वप्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ डा. तुलसी गिरीको निधन भयो । लामो समयदेखि कलेजोसम्बन्धी रोगका कारण कमजोर बनेका गिरीको ९३ वर्षको उमेरमा निधन भयो ।
वरिष्ठ न्यूरो सर्जन उपेन्द्र देवकोटा
तीनजना प्रदेश सांसद
नेकपामा प्रदेश सांसद उत्तरकुमार वलीको फागुन १० गते निधन भयो । माघ २४ गते कार दुर्घटनामा घाइते भएका सांसद वलीको फागुन १० गते निधन भएको थियो ।
भक्तपुर १ (क) बाट निर्वाचित प्रदेश नम्बर ३ का नेकपा सांसद हरिशरण लामिछानेको ५१ वर्षको उमेरमा निधन भयो । मस्तिष्कघातका कारण काठमाडौंको केएमसी अस्पतालमा उपचार क्रममा उनको निधन भएको हो ।
यस्तै गण्डकी प्रदेश सांसद बागलुङ २ (ख)का प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर घर्तीको गत मंसिर २७ मा निधन भयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद थिए ।
बाराका सीडीओ र एसपी
बारा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराईका फागुन ६ गते निधन भयो । माघ ११ गते सवारी दुर्घटनामा घाइते भएका सीडीयो भट्टराईको त्रिवि शिक्षण अस्पताल काठमाडौंमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो । उक्त दुर्घटनामा सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी बलराम पोखरेलको पनि ज्यान गयो ।
चक्र बाँस्तोलादेखि कमल पंगेनीसम्म
करीब छ वर्ष अघिदेखि अर्धचेत अवस्थामा रहेका कांग्रेस नेता चक्रप्रसाद बास्तोलाको गएको असोजमा बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा निधन भयो । विसं २०४८ सालमा भारतका लागि नेपालका राजदूत रहेका बाँस्तोला २०५८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका स्याङ्जाका जिल्ला सभापति कमल पंगेनीको साउन २० गते हृदयाघातका कारण निधन भयो ।
मानव अधिकारकर्मी पद्मरत्न तुलाधर
भाषाविद् पोख्रेल र साहित्यकार शर्मा
वरिष्ठ साहित्यकार एवं भाषाविद् प्राध्यापक बालकृष्ण पोखरेलको फागुन १२ गते विराटनगरमा निधन भयो । पोखरेलले १ सय ३० बढी पुस्तक लेखेका छन् ।
उनले खस जातिको इतिहास, १०० वर्ष र भाषाको शब्दकोष लेखेका छन् । पोखरेल २०३६ देखि २०४१ सम्म नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य समेत थिए ।
यस्तै वरिष्ठ साहित्यकार प्रा. मोहनराज शर्माको माघ १० गते ८१ वर्षको उमेरमा निधन भयो । मधुमेह, रक्तचाप र अन्य रोगबाट पीडित उनको कलङ्कीस्थित नेशनल अस्पतालमा निधन भएको हो ।
समालोचना, नाटक, कथा, कविता, उपन्यास लगायतका विषयमा उनका थुप्रै कृति प्रकाशित छन्।
बैशाख ४, २०७६ मा प्रकाशित
विप्लवको उल्टो बाटो : आक्रोशको 'आत्मघाती' व्यवस्थापन !
कलेजमा कुटपिट र झैझगडा बढेपछि विद्यार्थी संगठन र स्ववियू खारेज काठमाडौं – बैतडीको गोकुलेश्वर कृषि तथा पशु विज्ञान कलेजले विद्यार्थी झै–झगडा र कुटपिटमा लागेकै कारण विद्यार्थी संघ–संगठन खारेज गरिदिएको छ । गत शुक्रवार एक सूचना जा...
ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादी नीतिले देशको सार्वभौमिकतामाथि खतरा बढ्यो : डा. कोइराला